Daaweynta Cancer-ka Pancreatic & Bile Duct - Proton California
Daaweynta Borotokoolka Proton ee Daaweynta Kansarka iyo Daaweynta Kansarka Beerka
La dagaallanka Kansarka Kansarka Pancreatic & Bile with Precision Laser
Tikniyoolajiyadda baarista biraha qalinka ee xoogga leh ee loo yaqaan 'California Proton' ayaa ah daaweyn heer sare ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay kansarka sanbabada iyo xiidmaha oo u saamaxaya dhakhaatiirtayada inay si xushmad leh u bartilmaameedsadaan burooyinka ganaca iyo xiidmaha leh shucaac sare leh oo ku dhexjira aaggan xasaasiga ah ee adag.
Marka la barbar dhigo daaweynta daweynta ee proton therapy-passreading-ka firfircoon cudurka kansarka ee loo yaqaan 'pancreatic & bile duct cancer', teknoolojiyadda baarida qalin-jabinta waxay si sax ah u siineysaa daaweynta shucaaca kansarka naasaha iyo qanjirka laba-inji gudaha 2 milimitir iyo daryeelka ugu weyn. Waxaan ku weerari karnaa lakabada lakabka waxaanan yareyn karnaa waxyeelada unugyada iyo xubnaha jirka ee caafimaadka qaba. Tani waxay muhiim utahay bukaanka kansarka naasaha sababta oo ah yareynta shucaaca unugyada caafimaad ee ku xeeran waa muhiim maadaama qanjirkaaga ku yaal meel u dhow dhowr unugyo xasaasi ah oo muhiim ah iyo xubnaha. Yaraynta sunta shucaaca la xiriirta waxay sidoo kale kordhineysaa suuragalnimada in bukaanku ku dhammaystiri karaan daaweyn kala go ’yar ama dib u dhac ah.
Kansarka Pancreatic & Bile
Faahfaahinta Daaweynta Daaweynta Proton
Kansarka laba-cirifoodka (cholangiocarcinoma)
Ka ilaali beerkaaga, calooshaada, kelyaha, xiidmaha yar iyo xuubka laf-dhabarka
Joogto tayada noloshaada inta lagu guda jiro daaweynta kansarka naasaha iyo dheecaanka kaadi haysta
Yaree waxyeelada daaweynta, oo ay kujirto lallabbo, matag, wadna xanuun, casiraad, malaariyada (awood u laheyn nuugista nafaqada cuntada), shuban iyo fuuq bax.
Marka loo barbar dhigo shucaaca-raajada, daaweynta proton ee kansarka naasaha wuxuu yareynayaa soo-gaadhista shucaaca ee xubnaha muhiimka ah iyadoo:
Yaraynta soo-gaadhista shucaaca ee laf-dhabarka1
Yaraanta soo-gaadhista shucaaca ee beerka1
Faa'iidooyinka Daaweynta Proton ee Kansarka Pancreatic & Bile
Daaweynta proton-ka ee horumarsan waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si aad ah u soo bandhigaan shucaac heer sare ah kansarka naasaha iyo burooyinka burooyinka iyo unugyada, iyo inay yareeyaan qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah ee ku xeeran. Tan waxaa loo muujiyey inay gaarsiiso heerar ka sarreeya daaweynta shucaaca raajada-xitaa xitaa qaar ka mid ah xaaladaha ugu adag.
Dhakhaatiirtu waxay si mug leh ugu gudbin karaan qaddarka shucaaca shucaaca unugyada burada, iyagoon buux dhaafin xubnaha muhiimka ah iyo unugyada jilicsan, sida beerkaaga, calooshaada, kelyaha, xiidmaha yar yar iyo xuubka laf-dhabarka. Faafinta unugyadan caafimaad waa mid aad muhiim u ah maadaama burburka dhismayaashan xasaasiga ahi ay ku dambayn karaan nabarro, dilitaan, dhiigbax gudaha ah iyo guuldarrooyin.
Farsamooyinka takhasuska leh waxaa loo isticmaali karaa daaweynta proton-ka si loogu bar-tilmaameedsado qaabdhismeedka dhaqdhaqaaqa iyo xubnaha oo leh saxsanaansho farsamo oo weyn. Tani waxay muhiim u tahay daaweynta kansarka naasaha, markay saxitaanku fure tahay.
Daaweynta Daaweynta Daaweynta 'Proton Therapy' ee loogu talagalay Kansarka Cirridka & Bile
In kasta oo qalliinka loo yaqaan 'pancreatectomy' ama habka qalliinka ee loo yaqaan 'Whipple' guud ahaan lagu talinayo kansarka-hore (u eg) kansarka naasaha oo aan fidin, daaweynta shucaaca ayaa sidoo kale lagula talinayaa sidoo kale in la hubiyo in dhammaan unugyada kansarka la dilay. Shucaaca iyo kemotherabi ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa bukaannada aan qalliinka mari karin. Xulashada daaweynta ayaa sidoo kale saameyn ku leh nooca kansarka qanjirada, da'da, caafimaadka guud iyo doorbidyada shaqsiyadeed.
Marxaladda I ee kansarka naasaha waxaa laga helaa xiiq-dheerta kaliya laakiin koritaankiisa maxalliga ah wuxuu saameeyaa wax ka badan hal lakab unugyo. In kasta oo qalliinka looga saarayo burada waa daaweynta ugu badan, daaweynta shucaaca ee marxaladda I ee u eg kansarka naasaha ayaa badanaa lagu taliyaa in la hubiyo in dhammaan unugyada kansarka la dilay.
Kansarka ku dhaca heerka XNUMXaad wuxuu ku faafay meel ka baxsan mareenka ama unugyada qanjirada. In kasta oo qalliinka looga saarayo burooyinka ayaa ah daaweynta ugu badan, daaweynta shucaaca ee loogu talagalay marxaladda labaad ee kansarka naasaha waxaa badanaa lagula taliyaa in la hubiyo in dhammaan unugyada kansarka la dilay iyo in la yareeyo halista kansarka faafinta ama soo noqoshada.
Kansarku wuxuu ku faafay xididdada dhiigga ee waaweyn ama dareemeyaasha laakiin ma uusan qancin ama saameynin xubnaha kale. In kasta oo qalliinka looga saarayo burada waa daaweynta ugu caamsan, dhakhaatiirtu uma badna inay baabi'iyaan dhammaantood. Marxaladda III, kansarka qanjiraha ayaa si maxalli ah u horumarsan oo shucaac ayaa lagu tallin karaa isku day lagu doonayo in buro buro, loo xaddido koritaanka burooyinka dheeriga ah loona yareeyo halista faafinta meelaha kale ee jirka.
Heerka IV ee kansarka naasaha, kansarka wuxuu ku faafay beeryarada xubnaha kale. Daaweynta daroogada sida kemotherabi waa daaweynta ugu weyn ee lagula taliyo bukaanka qaba kansarka naasaha. In kasta oo qalliinka la sameyn karo, kansarradaan gabi ahaanba lama saari karo. Daaweynta shucaaca ee loo yaqaan 'Proton radiation treatment' ayaa loo isticmaali karaa in lagu gaabiyo burooyinka ama loo xakameeyo xanuunka.
Kansarka Xanuunada Soo noqnoqda
Natiijooyinka Daaweynta Pancreatic & Bile Duct Proton & Saamaynta Muddada-dheer
Daaweynta daaweynta loo yaqaan 'Proton therapy treatment for cancer' ee Kansarka Kansarka Protons ee Xarunta Daaweynta Kansarka ee San Diego ayaa laga yaabaa inay bixiso natiijooyin la mid ah shucaaca-raajada caadiga ah, iyadoo la dhimayo waxyeelada muddada-dheer iyo halista nolosha ee halista ah sida boogaha, daloolin, dhiigbax gudaha ah iyo xubnaha oo ku dhaca dartiis waxyeellada shucaaca ee soo gaarta beerka, kelyaha iyo xubnaha caloosha. Waxay kaloo yareyn kartaa fursadaha kansarrada sare nolosha dambe sababa la xiriira shucaaca oo yaraada u soo bixista unugyada caafimaadka qaba ee ku xeeran iyo xubnaha.
Daraasadaha Cilmi-baarista ee Taageeraya Daaweynta Proton ee Kansarka Pancreatic & Bile
1Daawada 'Proton therapy' waxay siisaa yareynta unugyada jirka unugyada caadiga ah ee bukaannada hela shucaaca qalliinka ka dib ee kansarka madaxa u eg
Wajiga I ee daraasad ku saabsan qalliinka muddada-gaaban ee premo-premologiska ah ee loo yaqaan 'proton beam therapy' iyo 'capecitabine' oo u eg labajibbaaranaha loo yaqaan 'pancreatic ductal adenocarcinoma' oo madaxa ah